FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ANY AN-TENDROMBOHITRA BERNESE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika any an-tendrombohitra Bernese
Harvey the Bernese Mountain Dog amin'ny 10 volana miasa amin'ny alika fitsaboana
Mpiompy ronono Bernese
Ny Bernese Mountain Dog dia alika lehibe, matanjaka, matanjaka ary mailaka. Somary lava kokoa noho ny hahavony ny vatana. Ny loha malalaka dia fisaka ambony ary misy fijanonana antonony. Mahery sy mahitsy ny vavam-borona. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny sofina antonony sy telozoro dia napetraka avo sy boribory eo amin'ny tendrony. Ny tongotra mahitsy dia matanjaka. Ny rambony be dia ambany. Matetika esorina ny lalàma. Boribory amin'ny rantsan-tongotra ny tongotra. Ny palitao azo antoka amin'ny toetr'andro dia lava lava, matevina ary somary milomano na mahitsy. Ny alika dia tricolor miaraka amin'ny marika simetrika mainty, harafesina ary fotsy. Mainty ny fototr'ilay alika. Ny alika dia may afo fotsy eo amin'ny tratrany ary fotsy ny lohany, ny rantsantongony ary ny tendron'ny rambony. Ny harafesina dia eo amin'ny takolaka ka hatramin'ny zoro-vava, amin'ny maso tsirairay, amin'ny lafiny roa amin'ny tratra, amin'ny tongotra efatra ary eo ambanin'ny rambony.
Ireto alika falifaly ireto dia tia ankizy. Tena manan-tsaina izy ireo, mora hampiofana ary mpiambina voajanahary, nefa tsy manjaka loatra. Ny alika an-tendrombohitra Bernese no ho sakaizanao mandritra ny fiainana. Matoky tena, mailo ary tsara toetra, matokia fa mifanerasera tsara amin'ny alika kely . Ireo alika ireo dia miadana mihamatotra, manao toy ny alika kely toy ny alika hafa. Izy ireo dia sariaka kokoa amin'ny olon-tsy fantatra, ary amin'ny ankapobeny dia tsara biby hafa sy alika. Ny Bernese dia mila miaraka amin'ny olona fa tsy voafetra any an-tokotany na amin'ny zaridaina. Ireo alika ireo dia mora tohina ary tokony hampiofanina tsara, nefa moramora. Ny tompon-trano dia hanana olana amin'ity alika ity fotsiny raha tsy mampiseho izy ireo fitarihana natoraly manoloana ny alika, mitondra azy tahaka ny zazakelin'izy ireo ary tsy manam-pahalalana momba izay alika voajanahary tokony hanana saina matanjaka. Tompony izay tsy maharesy lahatra ny alika ny olombelona dia alpha Mety hahita alika hafa mihitsy noho ny voalaza etsy ambony. Ho an'ny alika hahatsapa ho voaro dia mila mahafantatra mazava tsara ny lalàna izy mba hahafahana manaraka azy ireo, miroborobo amin'ny firafitra, miaraka amin'ny a fitsangatsanganana entana isan'andro mba hanomezana fahafaham-po ny instiny hivezivezy. Ny alika an-tendrombohitra Bernese dia nobeazina tamina asa asa ary azo zarina hisarika sarety na sarety.
Haavony: Lehilahy 24 - 28 santimetatra (61 - 71 cm) Vehivavy 23 - 27 santimetatra (58 - 69 cm)
Milanja: Lehilahy 85 - 110 pounds (38 - 50 kg) Vehivavy 80 - 105 pounds (36 - 48 kg)
Ny alika an-tendrombohitra Bernese dia mora tohina bloat , cancer ary ny olana eo amin'ny hodi-maso, ny tampoka sy ny treny. Mora mahazo lanja. Aza misakafo be loatra. Mora amin'ny fivontosan'ny sela .
Bernese Mountain Dogs dia tsy asaina mandritra ny fiainana an-trano. Tsy mihetsika izy ireo ao an-trano ary hanao izay tsara indrindra amin'ny tokontany malalaka sy fefy farafaharatsiny. Noho ny palitaony matevina dia mora tohina amin'ny hafanana izy ireo ary aleony miakatra amin'ny mari-pana mangatsiaka.
Ny alika mavitrika lehibe toa ireny dia mila fanatanjahan-tena matetika, izay misy a dia an-tongotra lavitra isan'andro .
6-8 taona eo ho eo. Ny salanisan'ny androm-piainan'ny Bernese dia nihena tato anatin'ny taona vitsivitsy, 10-12 taona ka hatramin'ny 6-8 taona. Ny BMD Club of America dia nanao fanadihadiana momba ny fahasalamana tamin'ny taona 2000 niaraka tamin'ny alika 1322. Ny salan'isan'ny taona maty dia 7.2 taona. Mampalahelo fa ampahany lehibe amin'ny tontolon'ny Berner ny homamiadana ary Berner maro no maty tanora. Loharanom-baovao iray no milaza 'Fantatro ny maro izay maty noho ny homamiadana tamin'ny 3-4 taona ary ny iray izay maty roa andro talohan'ny faha-2 taonany. Ny BMD Club of America dia manao fikarohana mahery momba ity resaka homamiadana ity! Tsy maintsy jerentsika raha afaka mamarana an'io toe-javatra mampalahelo io isika. '
Miovaova amin'ny alika 1 - 14, 8 antonony
Ny fanosorana ny palitao lava matevina isan'andro ho an'ny isan-kerinandro dia mila fitandremana fanampiny rehefa milatsaka ny palitao. Mandrosoa na shampooing maina raha ilaina. Ity karazana ity dia mpitrandraka mavesatra vanim-potoana.
Ny alika Bernese Mountain dia avy tany amin'ny tendrombohitra Soisa. Sary hosodoko taonjato faha-18 maro no mampiseho alika toa alika karazana Bernese. Ny karazany dia nomena anarana ho an'ny Canton of Bern any Suisse. Alika miasa manokana izy ireo amin'ny fahaiza-miasa, misarika sarety mankany an-tsena. Nampiasain'izy ireo koa ny fitondrana omby omby, hiambina ny toeram-piompiana ary ho naman'ny tantsaha. Tamin'ny faran'ny taonjato faha-19 dia alika maro hafa no nohafarana tany Soisa, izay nidina ny isan'ny Bernese satria nanomboka nampiasa karazana alika hafa ny mpiasa. Nisy ny ezaka nataon'ny vondron'olona iray nahitana ny profesora Albert Heim sy i Franz Schertenleib hitehirizana ny karazany. Nandehandeha nitady izay alika sisa tavela azony natao izy ireo mba hampiorenana ny Bernese. Androany dia lasa mpinamana mahafinaritra ity karazany ity ary mbola mankafy an'io drafitra asa azonao omena azy ireo mandraka androany. Ny talenta an-tsokosoko dia ny fanarahana, fiandrasana, fiambenana, fiambenana, fikarohana ary famonjena, sarety ary fankatoavana mifaninana.
Ivan the Bernese Mountain Dog— Vao folo taona i Ivan. Nahatratra ny CH izy tamin'ny faha-2 taonany. Alika lap lehibe izy, mora mandeha ary tia kibony. Tiany kilalao mitsitokotoko ary entiny miaraka aminy na aiza na aiza izany. Mandry miaraka amin'izy ireo akaiky izy. '
Vargas the Bernese Mountain Dog— 'Fiarahabana avy any Norvezy avy any Vargas, Berner Sennen 3 taona.'
Oktava Kalnarute ny Bernie
Kleopatra Herus Poseidonas, Sary nahazoana lalana avy tamin'i Kennel Poseidonas
Shasta ilay Berner purebred amin'ny 8 herinandro
Shasta ilay Berner purebred tamin'ny faha-14 herinandro
Ripley the Bernese Mt. Alika amin'ny 5 taona miaraka amin'i Gabby the Bernese Mt. Alika alika amin'ny 8 herinandro
'Pose mahazatra ho an'i Berner (Tally) 18 volana sy zanako lahy 3 taona'
Hijery ohatra misimisy momba ny alika Bernese Mountain
Bernese Mountain Dog Dog 1
karazana alika izay manomboka amin'ny s
Jack Russell terrier loko mainty sy fotsy
alika kely pitbull tongotra fohy amidy